Perezidaantii Masrii duraanii Muhaammad Mursii hidhaan woggaa 20 irratti murtaaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Perezidaantii Masrii duraanii Muhaammad Mursii hidhaan woggaa 20 irratti murtaaye
Perezidaantii Masrii duraanii Muhaammad Mursii irratti adabbiin hidhaa woggaa 20 labsame. Murteen kuni kan dabre Muhaammad Mursiifi angawoota ‘Muslim Brotherhood’ 12 irratti. Angawoota gameeyyii ‘Muslim Brotherhood’ yakka hojjatan jedhee guyyaa har’aa manni murtii adabbii irratti labse keessa Mohaammad El Betlaagiinis argama.
Murtiin Muhaammad Mursiifi anagwoota gameeyyii ‘Muslim Brotherhood’ iratti labsamu kuni kallattiidhaan televiziyoonii biyyattiitiin tamsa’aa ture.
Balleessaan isaanii, akka manni murtii jedhutti, bara 2012 keessa mormitoota isaanii doorsisuufi ukkaamsuudha. Manni murtii kuni himannaa ajjechaa Mursii irra ture kuffiseera, garuu. Himannaan kuni kufuu osoo baatee Mursii adabbii du’aatu eeggata ture.
Muhaammad Mursiifi angawoonni biroos yeroo murtiin labsamutti, ‘Rabbi Guddaadha’ jechuun dubbataniiru. Mursiinis, fonqolchaa isa irratti geggeeffame kufisuuf yaalii irraa kan ufhinqusanne ta’uu addeesseera.
Worri ‘Muslim Brotherhood’ garuu murtiin kuni kan argisiisu jallina seeraati jedhu. Murtii kanas kan ol iyyatan ta’uu beeksisaniiru.
perezidaantii masrii duraanii
Previous articleDhumaatii baqattoota galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruuf yaalanii 2015 keessa maaltu hammeesse?
Next articleBoordiin Filannoo Itoophiyaa paartilee filannoorratti hirmataniif maallaqa raabse; mormitoonni komii qaban